यि साहासी नेपाली चेलीले अस्ट्रेलियामा चक्कु देखाएर यसरि लखेटिन लुटेरालाई, बचाइन करोडौ रुपैयाँ, हेर्नुस सिसिटिभी फुटेज , अस्ट्रेलियन मिडियाले गरे तारिफ – live 60media
यि साहासी नेपाली चेलीले अस्ट्रेलियामा चक्कु देखाएर यसरि लखेटिन लुटेरालाई, बचाइन करोडौ रुपैयाँ, हेर्नुस सिसिटिभी फुटेज , अस्ट्रेलियन मिडियाले गरे तारिफ
सिड्नी। अस्ट्रेलियाका मिडियामा नेपाली युवती चर्चामा छाएकी छिन्। लु’ट्न आएको लु’टेरालाई च’क्कु देखाएर धपाएपछि उनको सर्वत्र चर्चा भएको हो। न्यु साउथ वेल्सको अबर्नमा रहेको मार्टमा काम गर्दागर्दै लुटेरा मार्टभित्र छिरेर नेपाली युवती पवित्रा कार्कीलाई ड’र देखाउँदै पैसा मागेको थियो। तर पवित्रा कार्कीले भान्सामा प्रयोग गरिने च’क्कु देखाउँदै लु’टेरालाई नै भगाइदिइन्।
स्थानिय मिडियाले उनलाई साहसी युवतीको रुपमा चि’त्रित गर्दै घट’नाको बारेमा समाचार प्रकाशन गरेका छन्।7News ले बनाएको भिडियो समाचार :
यो पनि – एप्पलले ल्यायो सबैभन्दा सस्तो आईफोन एसई, यस्ता छन् विशेषता
एप्पलले बिहीबार धेरै प्रतीक्षित रहेको आफ्नो ‘आइफोन एसई’ आईफोन सार्वजनिक गरेको छ। यसमा आइफोन ११ मा प्रयोग गरिएको प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ। ६४ जीवी, १२८ जीवी र २५६ जिबीमा उपलब्ध आइफोन एसईको मोडेल कालो, सेतो र रातो रङ्गमा उपलब्ध हुनेछ। यसमा ४.७ रेटिना एचडी डिस्प्ले भएको, टच आइडी भएको, एल्मुनियम र ग्लास डिजाइनमा बनेको आइफोन एसई पानी र धुलो प्रतिरोधी छ।
ब्याट्री क्षमता सम्बन्धी कुरा गर्दा यसमा फास्ट चार्जिङ र क्यूआइ सर्टिफाइड यसमा वायरलेस चार्जिङको सुविधा छ। १२ मेघापिक्सेल वाइड क्यामरामा इमेज प्रोसेसर र ए१३ बायोनिकको न्युरल इन्जिन प्रयोग भएको छ। यसमा आइफोन ११ का जस्तै पोट्रेट मोड, लाइटिङ एफेक्ट र देफ्त कन्ट्रोल जस्ता विशेषताहरु समेत छन्। उक्त आइफोनको मूल्य भारतमा ४२ हजार ५०० सय निर्धारण गरिएको छ।कम्पनीले बजारमा यो फोन कहिले उपलब्ध हुन्छ भन्ने बारेमा कही जानकारी दिएको छैन्। अमेरिकामा अप्रिल १७ बाट यसको प्रिअर्डर सुरु हुँदैछ।अहिलेसम्मकै सस्तो आइफोन नेपाली बजारमा पनि कम मूल्यमै पाइन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
← गरेको काम बिग्रने र असफल हुने भएको छ ? यसो गर्नुहोस् कहिले असफल हुनु पर्दैन !
कुकुरले आफ्नै ज्या*न फ्यालेर देखाएको बफादारीको यो तस्वीरले दुनियाँकै आँखा रसायो →